PSJTV | विप्लव भन्छन्- सरकारले हाम्रो इन्काउन्टर योजना बनाएको छ !
विप्लव भन्छन्- सरकारले हाम्रो इन्काउन्टर योजना बनाएको छ !
काठमाडौं: प्रतिबन्धित नेकपाका महासचिव नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ ले वार्ताले आफूहरुले उठाएका विषयको समाधान गरिहाल्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन नसकिने बताएका छन्। सरकारले वार्ताको लागि औपचारिक आग्रह नगरेको दाबी समेत उनले गरेका छन्। रामकृष्ण अधिकारीले लिएको विप्लवको अन्तर्वार्ता आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकले छापेको छ।
‘वार्ताबाट न हामी तर्सिन्छौँ, न त वार्ताले क्रान्तिले उठाएका विषयलाई समाधान गरिहाल्छ भन्नेमा विश्वस्त छौँ,’ उनले भने। एनसेलमाथिको कारबाहीपछि सरकारले पार्टी प्रतिबन्ध लगाएको उनको भनाई छ।
राजनीतिक दलका शीर्ष नेताको हत्या योजना उनको पार्टीले बनाएको भन्ने सरकारको दाबीमाथि विप्लवले खण्डन गरे। ‘यति गम्भीर विषयलाई बजारको व्यापार गराइएको छ,’ उनले भने, ‘यो नै अनौठो लाग्छ। यो प्रष्ट कुरा हो कि राज्यले हाम्रा नेतालाई इन्काउन्टरसम्मको योजना बनाएर शक्ति सञ्चालन गरेको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ।’
हेलिकोप्टरमा झुण्ड्याएर यसरी ल्याइयाे अर्काे हेलिकाेप्टर
कांग्रेस र कम्युनिस्टको विकल्पमा राष्ट्रवादी शक्ति तयार छ : कमल थापा
राजधानीवासी एक बालिकाको जन्मेको सात दिनमै आँखाको नानीको भाग सेतो देखियो। आँखा रातो र रसिलो भइरह्यो। अस्पताल पुगेर परीक्षण गर्दासम्म लक्षणहरुले क्यान्सरको रुप लिइसकेको रहेछ। सामान्य समस्या सोचेर अस्पताल पुगेका बालिकाका बाबुले ...
सरकारले मलेसियालगायतका विभिन्न गन्तव्य मुलुकमा कामदार पठाउन रोक लगाएपछि अधिकांश म्यानपावर बन्द हुने अबस्थामा पुगेका छन्। मुलुकमा हाल सञ्चालनमा रहेका ११ सय म्यानपावर कम्पनीमध्ये मुस्किलले २ दर्जन कम्पनीमात्र सञ्चालन खर्च धान्न ...
पाल्पाः पाल्पाका १० स्थानीय तहमध्ये रिब्दिकोट र रम्भा गाउँपालिकाले मात्रै प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेका छन्। बगनासकाली गाउँपालिकाले तयारीसमेत गरेको छैन। रोजगार संयोजक कामना पराजुली व्यक्तिगत कामले कार्यालय नआएपछि काम अघि ...